” မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးသို့ ပွောငျးရှေ့ ကစားခငျြကွောငျး ဖှငျ့ဟ ပွောကွားသှားခဲ့တဲ့ လိုငျလီအသငျးမှ နယျသာလနျကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ဘောမယျ “ – Sport Gaber
ယူနိုက်တက် အသင်းကို ပြောင်းရွေ့ ကစားချင်ကြောင်း လိုင်လီ အသင်းမှ နယ်သာလန်ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား ဘောမယ် က ဖွင့်ဟ ပြောကြားခဲ့တာ တွေ့ရဘာတယ် ။ အဆိုဘာ လိုင်လီအသင်းမှ နယ်သာလန် ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား ဘောမယ် သည် လက်ရှိအချိန်မှာ လိုင်လီ အသင်းရဲ့ အဓိက နောက်တန်း ကစားသမား ( 1 ) ယောက် အဖြစ်ခြေစွမ်း ပြသထားနိုင်တာ တွေ့ရဘာတယ် ။
လိုင်လီ အသင်းမှ နယ်သာလန်ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား ဘောမယ် သည် ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ အဓိက စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကစားသမား ဖြစ်တယ်လို့ သိရဘာတယ် ။
စာချုပ် သက်တမ်း 12 လသာ ကျန်ရှိ ပြီး ပြောင်းရွေ့ ကြေး7သန်း ဖြင့် ရရှိနိုင်မယ့် လိုင်လီ အသင်းမှ နယ်သာလန်ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား ဘောမယ် သည် ယူနိုက် တက် အသင်းရဲ့ ဦးစားပေး စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကစားသမား တွေထဲ နံပါတ် (3)ေးနေရာမှာ ရှိနေတာ လည်းဖြစ်ဘာတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်းမှ ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား ဗာရာနီ နဲ့ ဗီလာရီးရဲ အသင်းမှ စပိန်ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား တောရက် တို့ မှာ ပထမ နှင့် ဒုတိယ ဦးစားပေး ကစားသမား ဖြစ်ပြီး လိုင်လီ အသင်းမှ နယ်သာလန်ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား ဘောမယ် က တော့ တတိယ ဦးစားပေးနေရာမှာ တည် ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လိုင်လီ အသင်းမှ နယ်သာလန်ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား ဘောမယ် က သူအပေါ် ယူနိုက်တက် အသင်း စိတ်ဝင်စားနေတာ နဲ့ ပက်သက်ပြီး အရမ်းကို ကျေနပ် ၀မ်းသာဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ ယူနိုက်တက် အသင်းက ကျနော့်ကို စိတ်ဝင်စားနေတာ ကို ကြားသိရတဲ့ အတွက်၊ ယူနိုက်တက် ကို ကျနော် မပြောင်းခြင်ဖူး လို့ ပြော မိရင် ဒါဟာ အလိမ်အညာ ဘဲဖြစ်မှာပါ။
လကိရှိအချိန်မှာတော့ လိုင်လီ အသင်းမှ နယ်သာလန်ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား ဘောမယ် သည် အသင်း အတွက် အာရုံစိုက်ထားဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ရာသီကုန်ချိန်မှာတော့ ကျနော်အနားယူမယ် ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မယ် ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြ တာပေါ့” ဟု ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ အဆင့် ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား ( 1 ) ယောက် ကို ခေါ်ယူ လိုနေတဲ့ ဆိုးရှား အတွက်လည်း7သန်း သာကုန်ကျပြီး ကမ္ဘာ့ အဆင့် ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား ( 1 ) ယောက် ကို ရမှာဖြစ်ဘာတယ် ။
ဒါကြောင့် ဆိုးရှား သည် ဒေါ့မွန် အသင်းမှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဘို့. ဘက်ဂျက် ‌ချွေတာ ပြီး သား ဖြစ်မည် ဖြစ်တာ ကြောင့် လိုင်လီ အသင်းမှ နယ်သာလန်ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား ဘောမယ် အား အထူးတလည် စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း သိရပါသည်။
ယူနိုကျတကျ အသငျးကို ပွောငျးရှေ့ ကစားခငျြကွောငျး လိုငျလီ အသငျးမှ နယျသာလနျကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ဘောမယျ က ဖှငျ့ဟ ပွောကွားခဲ့တာ တှရေ့ဘာတယျ ။ အဆိုဘာ လိုငျလီအသငျးမှ နယျသာလနျ ကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ဘောမယျ သညျ လကျရှိအခြိနျမှာ လိုငျလီ အသငျးရဲ့ အဓိက နောကျတနျး ကစားသမား ( 1 ) ယောကျ အဖွဈခွစှေမျး ပွသထားနိုငျတာ တှရေ့ဘာတယျ ။
လိုငျလီ အသငျးမှ နယျသာလနျကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ဘောမယျ သညျ ယူနိုကျတကျ အသငျးရဲ့ အဓိက စောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ ကစားသမား ဖွဈတယျလို့ သိရဘာတယျ ။
စာခြုပျ သကျတမျး 12 လသာ ကနျြရှိ ပွီး ပွောငျးရှေ့ ကွေး7သနျး ဖွငျ့ ရရှိနိုငျမယျ့ လိုငျလီ အသငျးမှ နယျသာလနျကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ဘောမယျ သညျ ယူနိုကျ တကျ အသငျးရဲ့ ဦးစားပေး စောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ ကစားသမား တှထေဲ နံပါတျ (3)ေးနရောမှာ ရှိနတော လညျးဖွဈဘာတယျ ။
ရီးရဲမကျဒရဈ အသငျးမှ ပွငျသဈကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ဗာရာနီ နဲ့ ဗီလာရီးရဲ အသငျးမှ စပိနျကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား တောရကျ တို့ မှာ ပထမ နှငျ့ ဒုတိယ ဦးစားပေး ကစားသမား ဖွဈပွီး လိုငျလီ အသငျးမှ နယျသာလနျကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ဘောမယျ က တော့ တတိယ ဦးစားပေးနရောမှာ တညျ ရှိနတောလညျးဖွဈပါတယျ။
လိုငျလီ အသငျးမှ နယျသာလနျကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ဘောမယျ က သူအပျေါ ယူနိုကျတကျ အသငျး စိတျဝငျစားနတော နဲ့ ပကျသကျပွီး အရမျးကို ကနြေပျ ဝမျးသာဖှယျကောငျးပါတယျ။ ယူနိုကျတကျ အသငျးက ကနြေျာ့ကို စိတျဝငျစားနတော ကို ကွားသိရတဲ့ အတှကျ၊ ယူနိုကျတကျ ကို ကနြျော မပွောငျးခွငျဖူး လို့ ပွော မိရငျ ဒါဟာ အလိမျအညာ ဘဲဖွဈမှာပါ။
လကိရှိအခြိနျမှာတော့ လိုငျလီ အသငျးမှ နယျသာလနျကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ဘောမယျ သညျ အသငျး အတှကျ အာရုံစိုကျထားဆဲ ဖွဈကွောငျး ရာသီကုနျခြိနျမှာတော့ ကနြျောအနားယူမယျ ပွီးတဲ့ နောကျပိုငျး ဘာတှေ ဆကျဖွဈမယျ ဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ကွ တာပေါ့” ဟု ဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
ကမ်ဘာ့ အဆငျ့ ကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ( 1 ) ယောကျ ကို ချေါယူ လိုနတေဲ့ ဆိုးရှား အတှကျလညျး7သနျး သာကုနျကပြွီး ကမ်ဘာ့ အဆငျ့ ကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ( 1 ) ယောကျ ကို ရမှာဖွဈဘာတယျ ။
ဒါကွောငျ့ ဆိုးရှား သညျ ဒေါ့မှနျ အသငျးမှ အင်ျဂလနျကွယျပှငျ့ တိုကျစဈ ကစားသမား ဆနျခြိုကို ချေါယူဘို့. ဘကျဂကျြ ‌ခြှတော ပွီး သား ဖွဈမညျ ဖွဈတာ ကွောငျ့ လိုငျလီ အသငျးမှ နယျသာလနျကွယျပှငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ဘောမယျ အား အထူးတလညျ စိတျဝငျစားနကွေောငျး သိရပါသညျ။